Kuda-kupisa zvinopisa: kufungidzirwa nenyoka semhuka dziri mu terrariums
Nyoka yekurima inoreva kutakura mutoro unokosha
Nyoka dzinowanzokonzera maitiro akasiyana nevanhu: kunyangadza kana kufarira. Vanhu ivavo vanofadzwa nenyasha yenyoka haigoni kugutsikana kana mhuka dzisina mhuka dzichikwanisa kufamba, kunze kwekufambisa dumbu ravo.
Kuda kupisa zvinopisa: kufungidzirwa nenyoka mu terrariums
Vanobva vangofunga nezvekutanga kwemhuka.
Nyoka mu terrarium
Nyoka vari, iro rinonyanya pachena wose kwete vanhuwo dzinovaraidza. Nechekare ari kudya unoratidza kuti nyoka inofanira kuchengetwa zvachose zvakasiyana pane Somuenzaniso, hamsters, Guinea nguruve uye zvipfupi tsuro.
Mhirizhonga kazhinji inodya nyama mhenyu chete. Kunyangwe kana chikafu chisisisipo, somuenzaniso, kutungamirirwa kwechigunwe chemasikati masikati kana kuti mazuva mashomanana ane chirwere chekudya ndiwo mutemo weimwe imbwa dzinomira. Yakasiyana zvakasiyana pane inowanzoenderana nemaitiro anowanzochengetwa mumhuri, zvinogona kudyiwa nenzira yepellets kana mabhodhoro epurasitiki.
Kuchengetwa kwenyoka kunowanzova kwakaoma uye kunodhura kupfuura mafungiro eguinea yenguruve. Iko kunewo zvakanyanya kudhura mari, z. B. kubva kumagetsi mari yekupisa kwezuva (zvichidawo kupisa mate) uye kudya kunodhura pamwe chete.
Green nyoka mu terrarium
Muchengetedzi wenyoka ane njere anopa mhuka dzake mamiriro ezvinhu anogadziriswa ehupenyu hwake mu terrarium yake.
Zvakakosha kuti terrarium yenyoka nyoka inogadziriswa, nokuti haisi nyoka dzose inonzwa dzakanakira mumamiriro ezvinhu akafanana. Nzvimbo-inogara nyoka dzinofanirwa kuva nedhuarium nechepamusoro-soro, apo muti weyoka unonzwa wakasununguka mumatrariums anowanzokwira kumusoro uko pane kufara.
Nekucherechedza kweusiku kwenyoka, zvinonzwisisika kuti uve nemwenje ane chiedza tsvuku mukati kana kuti pa terrarium, nokuti nyoka haigone kuona chiedza chiri muvaravara uyu uye haunzwi uchinetseka nevanhu.
Senguva inouya nyoka muchengeti mumwechete anofanirawo kuva nechokwadi chokuti terrarium yakanaka kwazvo. Mhepo inokwana inogona kuwanikwa kuburikidza ne perforated metal sheet kana chipurasitiki chepurasitiki, kuchengetedza ventilation slots. Izvo zvakanaka nzvimbo yekudzivirira mafungiro inofungidzira kuiswa kwemavhiri maviri ekuzarura. Kune rumwe rutivi munzvimbo yakaderera, kune rumwe rutivi rwepamusoro munzvimbo yakakwirira.
Nzira dzakawanda dzenyoka dzinoda nzvimbo yekuviga kuti dzibate basa nguva dzezororo. Zvichienderana nedudzi rwenyoka, zvikwiriso zvakakodzera zvekukwira, zvinopisa sunbathing nzvimbo uye gomba rekudiridza, iro rinogona kushandiswa nenyoka sezvivako zvekushambidza, zvakare ndeye nzvimbo yakakodzera.
Ndiani anoda kuti tichengete nyoka kuti kuwa 'chepfu "uye / kana ari Mapato" pamusoro 3 tsoka vakareba "inofanira mvumo yakakodzera pamutemo sangano. Pakubata uturu, Zvinokurudzirwa kuti mukuwedzera uyewo kuti zvinobudirira pakaunda serum mumba kutora countermeasures kuti nokuruma.